Green aventurine kristaro ibwe rinoreva. Chimiro che quartz inochinja
Tags aventurine, green aventurine
Green aventurine kristaro ibwe rinoreva.
Tenga zvakasikwa aventurine muchitoro chedu
Chimiro che quartz, inozivikanwa nekushanduka kwayo uye kuvapo kweplaty mineral inclusions inopa kupenya kana kupenya kunodaidzwa kunonzi aventurescence.
Ruvara rwakanyanya kuve girini, asi inogona zvakare kunge iri orenji, brown, yero, bhuruu, kana grey. Chrome-inotakura fuchsite (akasiyana muscovite mica) ndiyo yakasarudzika kuiswa uye inopa silvery girini kana bhuruu sheen. Maorenji uye browns anonzi anonzi hematite kana goethite.
Nekuti idombo, zvimiro zvaro panyama zvinosiyana: giravhiti yacho chaiyo inogona kunge iri pakati pe2.64.
Aventurine feldspar kana dombo rezuva rinogona kuvhiringidzwa neorenji uye tsvuku aventurine quartzite, kunyangwe iyo yekutanga iri kazhinji yekuburitsa pachena. Dombo rinowanzo sungwa uye kuwanda kwe fuchsite kunogona kuitisa opaque, mune iyo kesi inogona kukanganisika nemalachite pakutanga kuona.
Zita rekuti aventurine rinobva kuItaly "a ventura" zvichireva "netsaona." Uku kufungidzira kune kuwanikwa nerombo rakanaka kweaventurine girazi kana dombo regoridhe pane imwe nguva muzana ramakore rechi18. Imwe nyaya inomhanyisa kuti girazi remhando iyi rakatanga kugadzirwa netsaona kuMurano nemushandi, uyo akarega mafirita emhangura awire mu "simbi" yakanyungudutswa, iko kwainzi chigadzirwa. Kubva pagirazi reMurano zita rakapfuudzwa kune iyo mineral, iyo yaitaridza kutaridzika kwakada kufanana. Kunyangwe zvaizivikanwa pekutanga, goridhe dombo rave kutevedzera zvakajairika kweaventurine uye zuva. Goldstone inosiyaniswa zvinoonekwa kubva kumaminerari maviri ekupedzisira neakapwanyika emhangura, akapararira mukati megirazi nenzira isina kujairika yunifomu. Inowanzoita shava yegoridhe, asi inogona kuwanikwa mubhuruu kana girini.
Ruzhinji rwegirinhi uye bhuruu-girini girini rinotangira muIndia, kunyanya padyo neMoresre neChennai, uko kunoshandiswa nevakawanda hunyanzvi. Creamy chena, grey uye orenji zvinhu zvinowanikwa muChile, Spain neRussia. Mazhinji zvinhu zvakavezwa mumabheji uye zvidhori zvine chete mienzaniso yakanaka kwazvo inogadzirwa mumabookoni, ichizogadzirirwa kuita zvishongo.
Aventurine crystal zvinoreva uye kuporesa zvivakwa zvinobatsira
Green aventurine ibwe zvinoreva ibwe rebudiriro. Inosimbisa hunhu hwehutungamiriri uye kusarudza. Inosimudzira tsitsi netsitsi. Inokurudzira kutsungirira. Iro dombo rinobvisa vanokakama uye zvakanyanya neuroses. Iyo inosimudzira mamiriro emunhu epfungwa, inomutsa kuona uye inowedzera kugona. Aids mukuona dzimwe nzira uye mikana. Inodzikamisa kutsamwa uye kutsamwa. Inosimudzira manzwiro ehupenyu hwakanaka. Iko kristaro inoenzanisa murume-mukadzi simba. Inokurudzira kuvandudzwa kwemoyo. Inodzivirira pakushatiswa kwezvakatipoteredza.
Aventurine pasi pe microscope
Chii chakanakira aventurine?
Inoenzanisa BP uye inomutsa metabolism, ichideredza cholesterol. Iyo kristaro ine anti-kuzvimba mhedzisiro uye inoderedza kuputika kweganda, allergies, migraines, uye inozorodza maziso. Inoporesa mapapu, zvitadzo, moyo, mhasuru uye urogenital masystem.
Chii chiri chirevo chemweya chegreen aventurine?
Green aventurine ibwe rinoreva rinoburitsa ekare mapatani, maitiro uye zvinoodza moyo saka kukura kutsva kunogona kuitika. Zvinounza tarisiro uye zest yehupenyu, ichibvumira munhu kufambira mberi nechivimbo uye kugamuchira shanduko. Inowedzera kugona uye kukurudzira, uye inokurudzira kutsungirira mukugadzirisa zvipingamupinyi zvehupenyu.
Ndekupi kwaunoisa aventurine dombo?
Isa dombo regirini aventurine kumabvazuva kana kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwemba kana imba kuwanda, hutano uye kukura zvine hutano. Imba yemwana, imba yekudyira, kicheni kana nzvimbo iyo chirongwa chitsva chave kuda kutanga chinogona kuvandudzwa nedombo.
Chii chinonzi aventurine chinomiririra?
Aventurine kristaro inoreva. Inozivikanwa sedombo rebudiriro, kubudirira, kuwanda, uye rombo rakanaka, kutakura chimedu chekristaro muhomwe yako, chikwama, kana paatari yako kunoyerera rombo rakanaka kwauri. Mhando yakajairika yekristaro yakasvibira, inotenderera kubva pakacheneruka kusvika kune yakasvibira girini, uye kana ikakwenenzverwa, inogona kuve nyore kuvhiringidzwa neyegirini jade.
Unogona here kupfeka girini aventurine mazuva ese?
Green aventurine ibwe rinosimudzira immune rekurapa kwemoyo uye kuporesa, hutano, uye kuwanda. Pfekai zuva nezuva kuti ubatsire kuyera moyo chakra.
Chii chakra chiri green aventurine?
Yakabatanidzwa kumoyo chakra, girini aventurine anovhura moyo yedu kuti isunungure nekusunungura zvipingamupinyi zvepfungwa uye zvisina kunaka mafungiro maitiro akatadzisa moyo kupora uye kuvharira kugona kwedu kuvimba murudo.
Unopfeka sei aventurine?
Zvinokurudzirwa kupfeka yakasvibira aventurine padyo nemoyo wako, kana pamapulse points Bhuruu aventurine inofanirwa kuiswa pane chechitatu-ziso chakra kubatsira kupora, kana pasi pepiro yako paunenge wakarara.
Unogona here kuisa aventurine mumvura?
Sekristaro yakaoma yakachengeteka mumvura. Sezvo rock crystal quartz, ametesti, smoty quartz, rose quartz, citrine, quartz yechando, Agate, kana jaspa.
Chii chinokwezva green aventurine?
Iyo ndeimwe yematombo epakutanga kukwezva mhanza, kuwanda uye kubudirira. Iro dombo rine simba rinonyaradza kuseri kwaro, uye rinokurudzirwa kushanda kuburikidza nekugadziriswa kwemanzwiro.
Ndeupi zuva wandinofanira kupfeka girini aventurine?
Chero ani zvake anogona kupfeka girini aventurine bracelet yekubudirira kwese. Inopa mhedzisiro yakanaka kune vanhu vane isina kusimba Mercury mune iyo horoscope. Vanhu vanozvarwa musi wa5, 14 & 23 wemwedzi chero upi zvawo vanofanira kuupfeka.
Iwe unochengeta sei green green aventurine?
Iko kristaro inogona kupera nekuratidzwa kwenguva yakareba kuzuva, saka chengeta matombo munzvimbo ine rima. Inoitawo kune tembiricha yakanyanyisa, saka chengetedza dombo iri kubva padanho remota yako muzhizha kana munguva yechando. Ive neshuwa yekuchenesa iri dombo rinokosha mumvura inodziya ine sipo uye jira rakapfava kana brashe.
Tenga zvakasikwa aventurine mune yedu gem shopu
Isu tinogadzira tsika yakasvibirira aventurine zvishongo semabatanidzwa, mhete, mhete dzemhete, zvishongo, zvishongo… ndapota taura nesu for quote.
Tags aventurine, girazi, goridhe